ရန်သူမိတ်ဆွေ မခွဲခြားပဲ အများအတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့်ခဲ့သူ ကြက်ခြေနီ ရဲ့ ဖခင်ကြီး ” ဟင်နရီဒူးနန့် “ – Na Pann San
ရန်သူမိတ်ဆွေ မခွဲခြားပဲ အများအတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့်ခဲ့သူ ကြက်ခြေနီ ရဲ့ ဖခင်ကြီး ” ဟင်နရီဒူးနန့် “
Na Pann San W | April 4, 2020 | Knowledge | No Comments
ရေးသားသူ — နစ်နေမန်း
၁၈၅၉ ခု ဇွန်လ ၂၄ ရက်နေ့ တွင် မြင်းရထား တစ်စင်း သည် အီတလီနိုင်ငံ ရှိ ဆိုဖီရီနိုမြို့သို့ မောင်းဝင်လာသည် ။ ရထားပေါ် တွင် လူရွယ် တစ်ဦး လိုက်ပါလာသည် ။ သူသည် ပြင်သစ် လူမျိုးတစ်ဦးဖြစ် ၍ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ၌ ဖွားမြင်ကာ ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာ ပင် နေထိုင်သူဖြစ်သည် ။ သူသည် အသက် ၃၁ နှစ် အရွယ်ခန့် ရှိသည် ။ အဖြူရောင် ဝ တ်စုံ ကို သားနား သေသပ်စွာ ဝတ်ဆင်ထားသည် ။ သူ့အမည် မှာ ဟင်နရီဒူးနန့် ဖြစ်သည် ။ အလုပ်အကိုင် အားဖြင့် ဘဏ် ဒါရိုက်တာလူကြီး လည်းဖြစ် ၍ ၊ ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာလူကြီးလည်း ဖြစ်သည် ။
သူရောက် လာချိန်ဝယ် ဆိုဖာရီနိုမြို့မှာ ပြင်းထန်သော စစ်ပွဲကြီး တစ်ပွဲ ဖြစ်ပွားအံ့ဆဲဆဲ ဖြစ်နေသည်။ ထိုစဉ်က သြစထရီးယားကတစ်ဖက်၊ ပြင်သစ်နှင့် ဆားဒီးနီးယားတို့ကတစ်ဖက် စစ် ဖြစ်ပွားလျက် ရှိသည်။ သြစထရီးယန်းတပ်များသည် အီတလီမြောက်ပိုင်းကို သိမ်းပိုက် ကျွန်ပြုထားသည်ဖြစ်ရာ ထိုဒေသရှိ ဆိုဖာရီနိုမြို့၌ သြစထရီးယန်းတပ်ကြီးက တစ်ဖက်၊ ပြင်သစ်နှင့် ဆားဒီးနီးယန်းတပ်များကတစ်ဖက် ရင်ဆိုင်တိုက်အံ့ဆဲဆဲ အချိန်ဖြစ်သည်။
သြစထရီးယန်းတပ်များ ကို ဖရန့်ဂျိုးဇက် ဘုရင်ကိုယ်တိုင် ကြီးမှူးကွပ်ကဲ သည်။ ပြင်သစ်နှင့် ဆားဒီးယန်းတပ်များကိုမူ တတိယမြောက်နပိုလီယံဘုရင်ကိုယ်တိုင် ကြီးမှူးကွပ်ကဲသည်။ ဟင်နရီဒူးနန့်သည် ထိုနေရာသို့ စစ်ရေးအတွက် ရောက်ရှိလာခြင်းမဟုတ်။ စီးပွားရေးအတွက် ရောက်ရှိလာခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ သူ၏ ကုမ္ပဏီသည် ထိုစဉ်က ပြင်သစ်ပိုင်ဖြစ်သော အယ်လ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံသို့ လေရဟတ်များ ရောင်းချရန်အတွက် ပြင်သစ်အစိုးရထံမှ ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံခဲ့သည်။ ထိုတောင်းခံချက်ကို ပါရီ မြို့ရှိ ကိုလိုနီဆိုင်ရာဋ္ဌာနက ငြင်းပယ်လိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် သူသည် အီတလီစစ်မြေပြင်၌ ရောက်ရှိနေသော နပိုလီယံဘုရင်ထံ ခွင့်တောင်းရန် လာရောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သူသည် ဆိုဖာရီနိုမြို့သို့ ဝင်မိသောအခါ ရှေ့ဆက်သွား၍ မရတော့ပေ။ ပြင်သစ်စစ်သားများဖြင့် လမ်းပိတ်ဆို့နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သူက ပြင်သစ်စစ်သားများ အား “ ခင်ဗျား တို့ ဧကရာဇ်ဘုရင် နဲ့ အရေးတကြီး တွေ့ချင်လို့ပါ။ လမ်းဖယ်ပေးပါ ခင်ဗျာ” ဟု ပြောဆိုသည်။ ထိုအခါ ပြင်သစ်စစ်ဗိုလ်တစ်ဦးက “ဘုရင်မင်းမြတ်ဟာ စစ်မြေပြင်ကို စစ်ချီသွားပြီ။ မကြာခင် စစ်ပွဲစတော့မယ်။ ခင်ဗျား ရှေ့ဆက်သွားလို့ မရတော့ဘူး။ ချက်ချင်းပြန်လှည့်သွားပါ ” ဟု ပြောဆိုတားမြစ်သည်။ ဤတွင် ဟင်နရီဒူးနန့်သည် ရထားပေါ် မှ ဆင်းကာ မြင်းတစ်စီးကို ပြောင်းစီးသည်။
ထို့နောက် ချီတက်သွားသော စစ်သားများနောက်မှ ကပ်လျက် လိုက်ပါသွားသည် ။ ယခု အချိန်တွင်မူ သူသည် နပိုလီယံဘုရင်နှင့်တွေ့ ဆုံရန် မဟုတ်တော့။ စစ်တိုက်ခိုက်သည်ကို မတွေ့မြင်ဖူးသဖြင့် အခွင့်ရခိုက် ကြည့်ရှု့လေ့လာရန် လိုက်ပါလာခြင်းဖြစ်လေ သည် ။
မကြာမီသူသည် စစ်မြေပြင်သို့ ရောက်ရှိသွားသည်။ သြစထရီးယန်း တပ်သားများသည် လင်းယုန်ငှက် တံဆိပ်အမှတ်အသားပါရှိသော အလံများကို လွှင့်ထူလျက် ရန်သူကို တိုက်ခိုက်ရန် အသင့်ပြင်ပြီး ဖြစ်ကြသည်။ ပြင်သစ်နှင့် ဆားဒီးနီးယန်းတပ်သားများ သည်လည်း တောက်ပသော ဝတ်စုံများ ကို ဆင်မြန်းလျက် ရန်သူများကို ရှိရာသို့ တစ်ဟုန်ထိုး ချီတက်သွားကြ သည်။
နှစ်ဖက်အင်အားမှာ စုစုပေါင်း သုံးသိန်းကျော်ရှိပေသည် ။ ဟင်နရီဒူးနန့်သည် ထိုတိုက်ပွဲကို တောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်မှနေ၍ စိတ်ဝင်စားစွာ ကြည့်ရှု့နေသည်။ အလွန်ကြည့်ကောင်းမည့် ပွဲကြီးပွဲကောင်း ဖြစ်လိမ့်မည် ဟု တွေးတောမျှော်လင့်နေသည် ။ သို့ရာ တွင် စစ်တပ်ကြီးနှစ်တပ် တွေ့ဆုံ တိုက်ခိုက်ကြသောအခါတွင်ကား သူ ထင်သကဲ့သို့ မဟုတ်၊ အလွန်ထိတ်လန့်ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ ကောင်းလှသည်ကို မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့မြင်ရလေသည် ။
ရှေးဦးစွာ အမြောက်သံများ ၊ သေနတ်သံများ ကို နားကွဲလုမတတ်ကြားရသည်။ ထို့နောက် ခုတ်ကြ ထစ်ကြသော အသံများကို ကြားရသည်။ မရှေးမနှောင်းပင် အော်ညည်းသံများကို ကြားရသည်။ စစ်မြေပြင်တစ်ခုလုံး ယမ်းငွေ့များ မှိုင်းဝေသွားပြီး ထိုယမ်းငွေ့များကြားထဲတွင် လူသေကောင်များနှင့် ဒဏ်ရာရသူများကို မြင်မကောင်း၊ ရှုမကောင်း တွေ့မြင်ရသည်။ တိုက်ပွဲသည် ၁၅ နာရီမျှ ကြာသည်။ နောက်ဆုံး၌ သြစထရီးယန်းတပ်သည် အရေးနိမ့်ကာ ဖရိုဖရဲဆုတ်ခွာ ထွက်ပြေးသွားကြသည်။ စစ်မြေပြင်၌ ကျဆုံးသူနှင့် ဒဏ်ရာရသူများမှာ စုစုပေါင်း လေးသောင်းကျော် ရှိသည်။
ဒဏ်ရာရသူများသည် မိမိတို့ လဲကျသည့် နေရာများ တွင် သနားစဖွယ် အော်ဟစ်ညည်းညူကား လူးလွန့်နေကြသည်။ ချစ်ချစ်တောက်ပူသော နေရောင်အောက်တွင် မရှုမလှ ဝေဒနာခံစားလျက် ရှိကြသည်။ အချို့က ရေငတ်လှသဖြင့် “ရေ. . . ရေ” ဟူ၍ တစာစာ အော်ဟစ်တောင်းနေသည်။ သူနာများထဲမှ အချို့ကို ပြင်သစ်နှင့် ဆားဒီးနီးယန်းတပ်သားများက ဖေးမ ခေါ်ဆောင်သွားကြသည်။ အများအပြားမှာမူ သည်အတိုင်းပင် ပိုးစိုးပက်စက် ရှိနေသည်။ ထိုစဉ်က ထိုနေရာ၌ သူနာတင်ရထားလည်း မရှိ။ ဆရာဝန်လည်း မရှိ။ သူနာပြုလည်း မရှိ။ ဒဏ်ရာရသူများမှာ ကယ်သူကင်းဝေးလျက် အရှင်လတ်လတ် ငရဲရောက်နေသကဲ့သို့ ရှိကြရှာပေသည်။
ဟင်နရီဒူးနန့်သည် ထိုရှုခင်းကို တွေ့ရသောအခါ ကြီး စွာသော တုန်လှုပ်ချောက်ချားခြင်း ဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်ဖန် တုန်လှုပ်ချောက်ချားရာမှ ကြီးစွာသော ကရုဏာစေတနာလည်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ သို့ဖြင့် သူသည် သူနာများကို အစွမ်းကုန် ကယ်ဆယ်မည်ဟူ၍ သန္နိဋ္ဌာန်ချလိုက်ကာ၊ တောင်ကုန်းပေါ်မှ ပြေးဆင်းလာခဲ့ပေသည်။ တပ်သားများ ခေါ်ဆောင် လာသော သူနာများတွင် အချို့ကို ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၌ ထားသည်။ အချို့ကို စာသင်ကျောင်းများ၌ ထားသည်။ အချို့ကို အိမ်များ၊ တဲများ၌ ထားသည်။
သို့တိုင်အောင်လည်း နေရာမဆံ့သဖြင့် အချို့မှာလမ်းများပေါ်ပင် ရှိနေကြသည် ။ ထိုသူနာများ ကို ကုသရန် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်ဆို၍လည်း အနည်းငယ်သာရှိသည်။ ထိုလက်တစ်ဆုပ်စာ မျှသာ ဆရာဝန်တို့သည် ခြေဖြတ် လက်ဖြတ် ရသော လုပ်ငန်းနှင့် ကြီးမားလှသည့် ဒဏ်ရာအပေါက်ကြီးများကို ဆို့ပိတ်ရ သော လုပ်ငန်းများလောက်ကိုသာ လုပ်နိုင်သည်။ သူနာကလည်း များလွန်း သည်။ ဆရာဝန်ကလည်း နည်းလွန်းသည်။ ထို့ပြင် ဆေးဝါး ပစ္စည်းကလည်း အလုံအလောက် မရှိပေ။
ဤအခြေအနေတွင် ဟင်နရီဒူးနန့်သည် အစွမ်းကုန် ဝင်ရောက်ကူညီလေ သည်။ သူသည် သူ့၌ ပါလာသော ငွေအားလုံးကို အီတလီ ရွာသားအချို့အား ပေးလိုက်ပြီး၊ အနီးရှိ မြို့သို့သွား၍ ဆေးဝါးနှင့် ပတ်တီးများ အမြန်ဝယ်ယူစေသည်။ ထို့ပြင် အနီးအနား ရွာများရှိ အီတလီ အမျိုးသမီးများကို စည်းရုံး၍ သူနာများကို ဝိုင်းဝန်းပြုစုစေသည်။ သူကိုယ်တိုင်လည်း ရေပုံးကို ထမ်းလျက် အနာများကို လိုက်လံဆေးကြော သုတ်သင်ပေးသည်။ ပတ်တီးစည်းပေးသည်။ သူ လျှောက်သွားသည့်အခါ သူ့ခြေထောက်ကို လှမ်းဖက်ကာ ရေတောင်းရှာသည့် သူနာများကိုလည်း ရေတိုက်ပေးသည်။ ထို့ပြင် စစ်မြေပြင်၌ ကျန်ရှိသေးသည့် သူနာများကိုလည်း သယ်ဆောင်၍ နေရာချထားပေးသည်။ သူနာများက သူ့အား “ဝတ်စုံဖြူနှင့် လူ” ဟူ၍ ခေါ်ကြသည်။ သို့ရာတွင် သူ့ဝတ်စုံဖြူမှာ သူနာများကို ပြုစုရသဖြင့် မဖြူတော့ဘဲ ညစ်ထည်းနေပြီ။
တစ်နေ့သ၌ သူသည် ပြင်သစ်တပ်သား သူနာများ ကို ပြုစုနေစဉ် သြစထရီးယန်းတပ်သားသူ နာနှစ်ယောက် ရောက်ရှိလာသည်။ ပြင်သစ်တပ်သားများက “ ဟေ့ ရန်သူတပ်သားတွေ ထွက်သွားကြ” ဟူ၍ အော်ဟစ် နှင်ထုတ် သည်။ ထိုအခါ ဟင်နရီဒူးနန့်သည် ပြင်သစ်တပ်သားများ၏ အပြုအမူကို တားမြစ်ကာ၊ ဩစထရီးယန်းတပ်သား သူနာနှစ်ဦးကို ကောင်းစွာ လက်ခံသည်။ “သည်နေရာမှာ ရန်သူဆိုတာ မရှိဘူး။ အားလုံး ညီရင်းအစ်ကိုတွေချည်းဘဲ” ဟု ဟင်နရီဒူးနန့်က ပြောဆိုသည်။ သြစထရီးယန်း တပ်သားနှစ်ဦးကို ကြင်နာစွာ ပြုစုစောင့်ရှောက်သည်။ အစက အီတလီရွာသူရွာသားများသည် ပြင်သစ်နှင့် ဆားဒီးနီးယန်းတပ်သား သူနာများကိုသာ ပြုစုလိုကြသည်။ သူတို့ကို ကျွန်ပြုသော သြစထရီးယန်း တပ်သားသူနာများကိုမူ မပြုစုလိုကြပေ။ သို့ရာတွင် ဟင်နရီဒူးနန့်၏ ကြီးမားသော ကရုဏာ စေတနာကို ခံစားသိရှိရသောအခါတွင်ကား သူတို့သည်လည်း ရန်သူ၊ မိတ်ဆွေ မရွေး ဒုက္ခရောက်သူ သူနာတိုင်းအပေါ် ကရုဏာထားကြပေသည်။
တစ်နေ့သ၌ ဘုရား ရှိခိုးကျောင်းတစ်ကျောင်း တွင် သူနာ ၅၀၀ ခန့်ကို ဟင်နရီဒူးနန့်တို့ တွေ့ရှိကြသည်။ ထိုသူနာများမှာ ငါးရက်လုံးလုံး အစာမတွေ့၊ ရေ မတွေ့၊ ဆေးမတွေ့ နှင့်။ ဝေဒနာကို အလူးအလိမ့် မချိမဆံ့ ခံနေကြရရှာသည်။ သူတို့အထဲတွင် ပြင်သစ်၊ သြစထရီးယန်း၊ ဆလပ်၊ အာရပ်၊ ဂျာမန် စသည့်ဖြင့် လူမျိုးပေါင်းစုံပါဝင်လေသည်။
စစ်ပွဲအပြီးတွင် ရန်သူနှင့်မိတ်ဆွေတို့သည် တစ်နေရာ တည်းတွင် စုရုံးလျက် ဆင်းရဲဒုက္ခ ခံနေရရှာသည်။ ဟင်နရီဒူးနန့်နှင့် အီတလီ ရွာသူရွာသားတို့သည် ထိုသူနာတို့ကို အစွမ်းကုန် ကူညီပြုစု စောင့်ရှောက်ကြသည်။ “ငါတို့အားလုံး ဟာ ညီအစ် ကို အရင်းအချာတွေဘဲ” ဟူသော စကားသည် ဤကရုဏာရှင်များ၏ ရင်မှ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပေသည်။
ဟင်နရီဒူးနန့်သည် ထိုအရပ်ဒေသ၌ ရက်ပေါင်းများစွာ ကြာအောင်ပင် နေထိုင်ကာ သူနာများကို အစွမ်းကုန် ပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့သည်။ ထိုနောက်မှ မိမိနေထိုင်ရာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသို့ ပြန်လာခဲ့ပေသည်။ ယင်းသို့ ပြန်လာစဉ် သူ ၏ ရင်မှာ တင်းကျပ်လျက် ရှိသည်။ စစ်ပွဲများကား ပေါ်လာဦးမည်ပင်။ စစ်ပွဲများ ပေါ်လာသည်နှင့်အမျှ သူနာများလည်း ပေါ်လာဦးမည်ပင်။ ထိုအခါ ထိုထိုသူနာများကို မည် သို့ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရမည်နည်း။
ဟင်နရီဒူးနန့်သည် ထိုနေ့၊ ထိုအချိန်မှစ၍ သူ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ကို စိတ်မဝင်စားတော့။ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကို ဂရုမစိုက်တော့။ ကြီးပွားတိုးတက်ရေးကို အလေးမထားတော့။ သူနာများကို ကယ်တင်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းကိုသာ စိတ်ဝင်စားတော့သည်။ သွားလည်းသည်စိတ်၊ ထိုင်လည်း သည်စိတ်၊ အိပ်လည်း သည်စိတ်၊ စားလည်း သည်စိတ်။ ထို့ကြောင့် သူသည် “ဆိုဖီရီနို မှတ်တမ်း” အမည်ရှိ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ၁၈၆၁ ခု၌ ရေးသားသည်။ ဆိုဖီရီနို စစ်မြေပြင်၌ သူတွေ့မြင်ခံစားခဲ့ရသည်တို့ကို နှလုံးသွေးဖြင့်ရေးသည့်ပမာ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ထိုစာအုပ်ကို အုပ်ရေတစ်ထောင် ပုံနှိပ်ပြီးလျှင် အရေးပါသော မိတ်ဆွေများနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများထံ ပေးပို့လေသည်။ ထိုစာအုပ်ငယ်သည် ဥရောပတိုက်ကြီးကို တုန်လှုပ်ချောက်ချားသွားစေသည်။
ရင်နာဖွယ် အဖြစ်အပျက်များသည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးသို့ တောမီးပမာ ပျံ့နှံ့သွားလေ သည်။ ထိုစာအုပ်ကို အကြိမ်ကြိမ် ထပ်မံပုံနှိပ်ရလေသည်။ ထိုစာအုပ်ကို ဖတ်ရှုသူတိုင်းပင် သူနာများ ကယ်ဆယ်ရေးအတွက် မည်သို့ ဆောင်ရွက်ရမည် ကို စဉ်းစားတွေးတောလာကြပေသည်။
ဟင်နရီဒူးနန့်က သူ့စာအုပ်တွင် သနားစဖွယ် သူနာများ၏ ဘဝကို တင်ပြထားသည်။ ထို့ပြင် သူနာများကို ကယ်ဆယ်ရန် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကရုဏာရှင်များ လိုအပ်သည့်နည်းတူ၊ ထိုကရုဏာရှင်များကိုလည်း သူနာပြုလုပ်ငန်းများ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရန် လိုသည်။ ဆိုဖီရီနို စစ်မြေပြင်၌ သူနာများကို ပြုစုရန် ကရုဏာရှင် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ပေါ်ထွက်လာအောင် စည်းရုံးနိုင်ခဲ့သော်လည်း၊ ထိုကရုဏာရှင်များမှာ သူနာပြုလုပ်ငန်းများကို မတတ်ကျွမ်းသဖြင့် အခက်အခဲများစွာ တွေ့ရသည် ဟူ၍လည်း တင်ပြထားပေသည်။
စာအုပ် ထွက်ပေါ်ပြီး မကြာမီပင် ဂျနီဗာမြို့တွင်ရှိသော ဟင်နရီဒူးနန့် ၏ မိတ်ဆွေကြီးလေးဦးသည် ဟင်နရီဒူးနန့်နှင့်အတူ စတင် အလုပ်လုပ်ကြသည်။ မိတ်ဆွေကြီးလေးဦးမှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒူဖိုး၊ ဂျီနီဗာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း အသင်းကြီး၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဂူစတေ့မိုနီယာ၊ ဒေါက်တာ အမ္မီယ၊ ဒေါက်တာသီအိုဒိုမောနေး တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ဟင်နရီဒူးနန့်နှင့် ထိုမိတ်ဆွေကြီးလေးဦးတို့သည် ငါးဦးကော်မတီတစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်။ သူနာများကယ်ဆယ်ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ညီလာခံကြီးကို ဂျီနီဗာမြို့၌ ကျင်းပရန် ဆော်ဩဆာင်ရွက်ကြသည်။
ဟင်နရီဒူးနန့် သည် ထိုညီလာခံကြီး ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် မအိပ်မနေ ဆောင်ရွက်သည်။ သူ့စာအုပ်ကို အကြောင်းပြု၍ သူ့စေတနာကို အများကသိပြီး ဖြစ်ရာ သူသည် နိုင်ငံအများ သို့ သွားရောက်သည်။ ညီလာခံကြီးဖြစ်မြောက် အောင်မြင်ရေးအတွက် အရေးပါသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကို တွေ့ဆုံသည်။ အဖွဲ့အစည်းများကို ချည်းကပ်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးထံသို့ စာရေးသား ပေးပို့သည်။ သူ၏ စာအုပ်များကို ဝေငှသည်။ အမေရိကန်သမ္မတကြီး လင်ကွန်းထံသို့ စာရေး၍ မေတ္တာရပ်ခံရာ ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦး စေလွှတ်ပါမည်ဟူ၍ လင်ကွန်းက ကတိပေး ပြန်ကြားခဲ့သည်။
ပြင်သစ်ပြည် စစ်ဝန်ကြီးကမူ ဟင်နရီဒူးနန့်၏ စာအုပ်သည် ပြင်သစ်ပြည်ကို ထိပါးစေသည်ဟုဆိုကာ ဟင်နရီဒူးနန့်ကို ဆန့်ကျင်ဘက် ပြုခဲ့သည်။ ထိုအခါ ဟင်နရီဒူးနန့်သည် နပိုလီယံ ထံမှောက်သို့ ဝင်ရောက်ပြီး ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ သည်။ မေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည်။ ထိုအခါ နပိုလီယံက ဟင်နရီဒူးနန့်၏ လုပ်ငန်းကို စိတ်ဝင်စားကြောင်း အားတက်ဖွယ်ရာ ပြန်ကြားပြောဆို လိုက်သည်။
သို့ဖြင့် ၁၈၆၃ ခု အောက်တိုဘာလ တွင် ပထမဦးဆုံး ညီလာခံကို ဂျီနီဗာမြို့၌ ကျင်းပခဲ့သည်။ နိုင်ငံပေါင်း ၁၅ နိုင်ငံမှ အရေးပါအရာရောက်သော ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများ တက်ရောက်ကြသည်။ မိုနီယာက ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဟင်နရီဒူးနန့်က အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။ ထိုညီလာခံမှာပင် ဟင်နရီဒူးနန့် တောင့်တသော ကြက်ခြေနီအသင်းကြီး သန္ဓေတည်ခဲ့သော ၁၈၆၄ ခု နှစ်မှစ၍ အကောင်အထည်ပေါ်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာအနှံ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ နောက်ဆုံး ကြက်ခြေနီလုပ်ငန်းသည် တစ်စတစ်စ တိုးတက်လာစဉ် ဟင်နရီဒူးနန့်၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာမူ တစ်စတစ်စ ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာသည်။ သူသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဂရုမပြုဘဲ ကြက်ခြေနီလုပ်ငန်းများကိုသာ ဂရုပြု ဆောင်ရွက်နေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံး ၁၈၆၇ခု နှစ်တွင် သူ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံး ဖရိုဖရဲ ပြိုကွဲပျက်စီးသွားလေသည်။ ထိုအခါ သူ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် အစုရှယ်ယာ ထည့်သွင်းပါဝင်သူများက သူ့ကို အပြစ်ဆိုကြသည်။ သူ့အကြောင်း မကောင်းပြောကြသည်။
ဤတွင် ဟင်နရီဒူးနန့်သည် သူချစ်မြတ်နိုးလှသည့် ကြက်ခြေနီအသင်းကြီးမှ ချက်ချင်း နုတ်ထွက်လိုက်လေသည်။ စီးပွားရေးနှင့်ပတ်သက်၍ သူသည် နာမည်ပျက်တစ်ယောက် ဖြစ်သွားရာ၊ သူ့ကြောင့် မွန်မြတ်လှသော ကြက်ခြေနီအသင်းကြီးနှင့် ကြက်ခြေနီလုပ်ငန်းများကို မထိခိုက်စေလိုသဖြင့် သူ့ခမျာ အသင်းမှ နုတ်ထွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဟင်နရီဒူးနန့်သည် အသင်းမှ နုတ်ထွက်လိုက်သောအခါ လုံးဝ ဩဇာအာဏာ မရှိတော့ပေ။ သူက မည်မျှ စေတနာထား၍ မည်သို့ အကြံကောင်း၊ ဉာဏ်ကောင်းများ ပေးစေကာမူ လက်မခံကြတော့ပေ။ သူ့ကို လုံးဝ ဂရုမပြုကြတော့ပေ။ ဥပေက္ခာ ပြုထားလိုက်ကြလေသည်။
ထိုအချိန်တွင် သူ့၌ ငွေကြေးလည်း မရှိတော့ပေ။ အပေါင်းအသင်းလည်း မရှိတော့။ သူသည် အထီးကျန် ဖြစ်နေပေပြီ။ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပင် ဟင်နရီဒူးနန့်၏ အမည်သည် ကြက်ခြေနီလောကမှ ပျောက်ကွယ်သွားလေသည်။ သူ့အမည်နှင့်အတူ ဟင်နရီဒူးနန့်သည်လည်း ဂျီနီဗာမြို့မှ ပျောက်ကွယ်သွားလေသည်။
ထိုသို့ ပျောက်ကွယ်သွားရာမှ နှစ်ပေါင်း ၃၀ အကြာတွင် သတင်းစာဆရာတစ်ဦးသည် ဟိုက်ဒင်အမည်ရှိ ဆွစ်တောင်ပေါ် ရွာကလေးတစ်ရွာသို့ ဖြတ်သန်းသွားလာစဉ်၊ ထိုရွာ၌ ထူးခြားသော အသွင်ရှိသည့် အဘိုးအိုတစ်ဦးကို တွေ့ ရသည်။ ထိုအဘိုးအိုမှာ ဆံမုတ်ဆိတ်များ ဖွေးဖွေးဖြူလျက်၊ အိမ်ကလေး တစ်လုံးတွင် မထင်မရှား ဆင်းဆင်းရဲရဲ နေထိုင်လျက်ရှိသည်။ သတင်းစာဆရာသည် ကြင်နာသော အမူအရာရှိသည့် အဘိုးအိုနှင့် စကားစမြည် ပြောရာမှ ထိုအဘိုးအိုမှာ အခြားသူမဟုတ်။ ကြက်ခြေနီ ဖခင်ကြီး ဟန်နရီဒူးနန့် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိသွားသည်။
သတင်းစာဆရာသည် အံ့အားသင့် မဆုံးပြီ။ သူသည် ကြက်ခြေနီ ဖခင်ကြီး ဟင်နရီဒူးနန့် တစ်ယောက်ကွယ်လွန်ပြီဟု ထင်မှတ်ခဲ့သည်။ သူ့နည်းတူ အများကလည်း ထင်မှတ်ခဲ့သည်။ ယခုကား ကြက်ခြေနီဖခင်ကြီးမှာ အသက်ထင်ရှား ရှိနေတုန်းပင်။ သတင်းစာဆရာသည် ဟင်နရီဒူးနန့်ကို မမျှော်လင့်ဘဲ ဟိုက်ဒင်ရွာကလေး၌ တွေ့ရှိပုံ အကြောင်းအစုံကို သတင်းစာများသို့ သတင်းရေးသား ပေးပို့လိုက်သည်။ ထိုအခါ လူအများသည် လှုပ်လှုပ်ရွရွ ဖြစ်သွားကြသည်။
အချို့က ဟင်နရီဒူးနန့်ထံ စာများရေးကြသည်။ အချို့က ငွေကြေး လက်ဆောင်များ ပေးပို့ကြသည်။ အချို့က လူကိုယ်တိုင် လာရောက်တွေ့ဆုံကြသည်။ ထို့နောက် တည်ထောင်ခါစဖြစ်သော နိုဗယ်(လ်)ဆု ချီးမြှင့်ရေးအဖွဲ့ကြီးက ၁၉၀၁ ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံးသော ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာ နိုဗယ်(လ်)ဆုကြီးကို ဟင်နရီဒူးနန့်နှင့် ပါစီတို့အား ပူးတွဲပေးလိုက်လေသည်။ ပါစီမှာ ငြိမ်းချမ်းရေး အသင်းကြီးကို တည်ထောင်သူ ပြင်သစ်လူမျိုး ဖရက်ဒရစ်ပါစီပင် ဖြစ်ပေသည်။
ဟင်နရီဒူးနန့်သည် ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဗယ်(လ်) ဆုကို ရရှိပြီး ၉ နှစ်အကြာ၊ ၁၉၁၀ ပြည့်နှစ် အသက် (၈၂) နှစ်အရွယ်တွင် ဟိုက်ဒင်ရွာ ဆေးရုံကလေးမှာပင် ကွယ်လွန်သွားရှာပေသည်။ ၁၉ ရာစုနှစ်တွင် လူသားတို့အကျိုးကို အဆောင်ရွက်ဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ကို ညွှန်ပြပါဆိုလျှင် အများကပင် ဟင်နရီဒူးနန့်ကို ညွှန်ပြကြပေမည် ဖြစ်ပေသည်။ ဟင်နရီဒူးနန့်ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ သူ့ရဲ မွေးနေ့မေလ (၈) ရက်နေ့ကို နိုင်ငံတကာကြက်ခြေနီနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။
ရေးသားသူ — နဈနမေနျး
၁၈၅၉ ခု ဇှနျလ ၂၄ ရကျနေ့ တှငျ မွငျးရထား တဈစငျး သညျ အီတလီနိုငျငံ ရှိ ဆိုဖီရီနိုမွို့သို့ မောငျးဝငျလာသညျ ။ ရထားပျေါ တှငျ လူရှယျ တဈဦး လိုကျပါလာသညျ ။ သူသညျ ပွငျသဈ လူမြိုးတဈဦးဖွဈ ၍ ဆှဈဇာလနျနိုငျငံ ၌ ဖှားမွငျကာ ၊ ဆှဈဇာလနျနိုငျငံမှာ ပငျ နထေိုငျသူဖွဈသညျ ။ သူသညျ အသကျ ၃၁ နှဈ အရှယျခနျ့ ရှိသညျ ။ အဖွူရောငျ ဝ တျစုံ ကို သားနား သသေပျစှာ ဝတျဆငျထားသညျ ။ သူ့အမညျ မှာ ဟငျနရီဒူးနနျ့ ဖွဈသညျ ။ အလုပျအကိုငျ အားဖွငျ့ ဘဏျ ဒါရိုကျတာလူကွီး လညျးဖွဈ ၍ ၊ ကုမ်ပဏီဒါရိုကျတာလူကွီးလညျး ဖွဈသညျ ။
သူရောကျ လာခြိနျဝယျ ဆိုဖာရီနိုမွို့မှာ ပွငျးထနျသော စဈပှဲကွီး တဈပှဲ ဖွဈပှားအံ့ဆဲဆဲ ဖွဈနသေညျ။ ထိုစဉျက သွစထရီးယားကတဈဖကျ၊ ပွငျသဈနှငျ့ ဆားဒီးနီးယားတို့ကတဈဖကျ စဈ ဖွဈပှားလကျြ ရှိသညျ။ သွစထရီးယနျးတပျမြားသညျ အီတလီမွောကျပိုငျးကို သိမျးပိုကျ ကြှနျပွုထားသညျဖွဈရာ ထိုဒသေရှိ ဆိုဖာရီနိုမွို့၌ သွစထရီးယနျးတပျကွီးက တဈဖကျ၊ ပွငျသဈနှငျ့ ဆားဒီးနီးယနျးတပျမြားကတဈဖကျ ရငျဆိုငျတိုကျအံ့ဆဲဆဲ အခြိနျဖွဈသညျ။
သွစထရီးယနျးတပျမြား ကို ဖရနျ့ဂြိုးဇကျ ဘုရငျကိုယျတိုငျ ကွီးမှူးကှပျကဲ သညျ။ ပွငျသဈနှငျ့ ဆားဒီးယနျးတပျမြားကိုမူ တတိယမွောကျနပိုလီယံဘုရငျကိုယျတိုငျ ကွီးမှူးကှပျကဲသညျ။ ဟငျနရီဒူးနနျ့သညျ ထိုနရောသို့ စဈရေးအတှကျ ရောကျရှိလာခွငျးမဟုတျ။ စီးပှားရေးအတှကျ ရောကျရှိလာခွငျးသာ ဖွဈသညျ။ သူ၏ ကုမ်ပဏီသညျ ထိုစဉျက ပွငျသဈပိုငျဖွဈသော အယျလျဂြီးရီးယားနိုငျငံသို့ လရေဟတျမြား ရောငျးခရြနျအတှကျ ပွငျသဈအစိုးရထံမှ ခှငျ့ပွုခကျြ တောငျးခံခဲ့သညျ။ ထိုတောငျးခံခကျြကို ပါရီ မွို့ရှိ ကိုလိုနီဆိုငျရာဋ်ဌာနက ငွငျးပယျလိုကျသညျ။ ထို့ကွောငျ့ သူသညျ အီတလီစဈမွပွေငျ၌ ရောကျရှိနသေော နပိုလီယံဘုရငျထံ ခှငျ့တောငျးရနျ လာရောကျခွငျး ဖွဈသညျ။ သူသညျ ဆိုဖာရီနိုမွို့သို့ ဝငျမိသောအခါ ရှဆေ့ကျသှား၍ မရတော့ပေ။ ပွငျသဈစဈသားမြားဖွငျ့ လမျးပိတျဆို့နသေောကွောငျ့ဖွဈသညျ။
သူက ပွငျသဈစဈသားမြား အား “ ခငျဗြား တို့ ဧကရာဇျဘုရငျ နဲ့ အရေးတကွီး တှခေ့ငျြလို့ပါ။ လမျးဖယျပေးပါ ခငျဗြာ” ဟု ပွောဆိုသညျ။ ထိုအခါ ပွငျသဈစဈဗိုလျတဈဦးက “ဘုရငျမငျးမွတျဟာ စဈမွပွေငျကို စဈခြီသှားပွီ။ မကွာခငျ စဈပှဲစတော့မယျ။ ခငျဗြား ရှဆေ့ကျသှားလို့ မရတော့ဘူး။ ခကျြခငျြးပွနျလှညျ့သှားပါ ” ဟု ပွောဆိုတားမွဈသညျ။ ဤတှငျ ဟငျနရီဒူးနနျ့သညျ ရထားပျေါ မှ ဆငျးကာ မွငျးတဈစီးကို ပွောငျးစီးသညျ။
ထို့နောကျ ခြီတကျသှားသော စဈသားမြားနောကျမှ ကပျလကျြ လိုကျပါသှားသညျ ။ ယခု အခြိနျတှငျမူ သူသညျ နပိုလီယံဘုရငျနှငျ့တှေ့ ဆုံရနျ မဟုတျတော့။ စဈတိုကျခိုကျသညျကို မတှမွေ့ငျဖူးသဖွငျ့ အခှငျ့ရခိုကျ ကွညျ့ရှု့လလေ့ာရနျ လိုကျပါလာခွငျးဖွဈလေ သညျ ။
မကွာမီသူသညျ စဈမွပွေငျသို့ ရောကျရှိသှားသညျ။ သွစထရီးယနျး တပျသားမြားသညျ လငျးယုနျငှကျ တံဆိပျအမှတျအသားပါရှိသော အလံမြားကို လှငျ့ထူလကျြ ရနျသူကို တိုကျခိုကျရနျ အသငျ့ပွငျပွီး ဖွဈကွသညျ။ ပွငျသဈနှငျ့ ဆားဒီးနီးယနျးတပျသားမြား သညျလညျး တောကျပသော ဝတျစုံမြား ကို ဆငျမွနျးလကျြ ရနျသူမြားကို ရှိရာသို့ တဈဟုနျထိုး ခြီတကျသှားကွ သညျ။
နှဈဖကျအငျအားမှာ စုစုပေါငျး သုံးသိနျးကြျောရှိပသေညျ ။ ဟငျနရီဒူးနနျ့သညျ ထိုတိုကျပှဲကို တောငျကုနျးတဈခုပျေါမှနေ၍ စိတျဝငျစားစှာ ကွညျ့ရှု့နသေညျ။ အလှနျကွညျ့ကောငျးမညျ့ ပှဲကွီးပှဲကောငျး ဖွဈလိမျ့မညျ ဟု တှေးတောမြှျောလငျ့နသေညျ ။ သို့ရာ တှငျ စဈတပျကွီးနှဈတပျ တှဆေုံ့ တိုကျခိုကျကွသောအခါတှငျကား သူ ထငျသကဲ့သို့ မဟုတျ၊ အလှနျထိတျလနျ့ကွောကျမကျဖှယျရာ ကောငျးလှသညျကို မကျြဝါးထငျထငျ တှမွေ့ငျရလသေညျ ။
ရှေးဦးစှာ အမွောကျသံမြား ၊ သနေတျသံမြား ကို နားကှဲလုမတတျကွားရသညျ။ ထို့နောကျ ခုတျကွ ထဈကွသော အသံမြားကို ကွားရသညျ။ မရှေးမနှောငျးပငျ အျောညညျးသံမြားကို ကွားရသညျ။ စဈမွပွေငျတဈခုလုံး ယမျးငှမြေ့ား မှိုငျးဝသှေားပွီး ထိုယမျးငှမြေ့ားကွားထဲတှငျ လူသကေောငျမြားနှငျ့ ဒဏျရာရသူမြားကို မွငျမကောငျး၊ ရှုမကောငျး တှမွေ့ငျရသညျ။ တိုကျပှဲသညျ ၁၅ နာရီမြှ ကွာသညျ။ နောကျဆုံး၌ သွစထရီးယနျးတပျသညျ အရေးနိမျ့ကာ ဖရိုဖရဲဆုတျခှာ ထှကျပွေးသှားကွသညျ။ စဈမွပွေငျ၌ ကဆြုံးသူနှငျ့ ဒဏျရာရသူမြားမှာ စုစုပေါငျး လေးသောငျးကြျော ရှိသညျ။
ဒဏျရာရသူမြားသညျ မိမိတို့ လဲကသြညျ့ နရောမြား တှငျ သနားစဖှယျ အျောဟဈညညျးညူကား လူးလှနျ့နကွေသညျ။ ခဈြခဈြတောကျပူသော နရေောငျအောကျတှငျ မရှုမလှ ဝဒေနာခံစားလကျြ ရှိကွသညျ။ အခြို့က ရငေတျလှသဖွငျ့ “ရေ. . . ရေ” ဟူ၍ တစာစာ အျောဟဈတောငျးနသေညျ။ သူနာမြားထဲမှ အခြို့ကို ပွငျသဈနှငျ့ ဆားဒီးနီးယနျးတပျသားမြားက ဖေးမ ချေါဆောငျသှားကွသညျ။ အမြားအပွားမှာမူ သညျအတိုငျးပငျ ပိုးစိုးပကျစကျ ရှိနသေညျ။ ထိုစဉျက ထိုနရော၌ သူနာတငျရထားလညျး မရှိ။ ဆရာဝနျလညျး မရှိ။ သူနာပွုလညျး မရှိ။ ဒဏျရာရသူမြားမှာ ကယျသူကငျးဝေးလကျြ အရှငျလတျလတျ ငရဲရောကျနသေကဲ့သို့ ရှိကွရှာပသေညျ။
ဟငျနရီဒူးနနျ့သညျ ထိုရှုခငျးကို တှရေ့သောအခါ ကွီး စှာသော တုနျလှုပျခြောကျခြားခွငျး ဖွဈခဲ့သညျ။ တဈဖနျ တုနျလှုပျခြောကျခြားရာမှ ကွီးစှာသော ကရုဏာစတေနာလညျး ဖွဈပျေါခဲ့သညျ။ သို့ဖွငျ့ သူသညျ သူနာမြားကို အစှမျးကုနျ ကယျဆယျမညျဟူ၍ သန်နိဋ်ဌာနျခလြိုကျကာ၊ တောငျကုနျးပျေါမှ ပွေးဆငျးလာခဲ့ပသေညျ။ တပျသားမြား ချေါဆောငျ လာသော သူနာမြားတှငျ အခြို့ကို ဘုရားရှိခိုးကြောငျး၌ ထားသညျ။ အခြို့ကို စာသငျကြောငျးမြား၌ ထားသညျ။ အခြို့ကို အိမျမြား၊ တဲမြား၌ ထားသညျ။
သို့တိုငျအောငျလညျး နရောမဆံ့သဖွငျ့ အခြို့မှာလမျးမြားပျေါပငျ ရှိနကွေသညျ ။ ထိုသူနာမြား ကို ကုသရနျ စဈဘကျဆိုငျရာ ဆရာဝနျဆို၍လညျး အနညျးငယျသာရှိသညျ။ ထိုလကျတဈဆုပျစာ မြှသာ ဆရာဝနျတို့သညျ ခွဖွေတျ လကျဖွတျ ရသော လုပျငနျးနှငျ့ ကွီးမားလှသညျ့ ဒဏျရာအပေါကျကွီးမြားကို ဆို့ပိတျရ သော လုပျငနျးမြားလောကျကိုသာ လုပျနိုငျသညျ။ သူနာကလညျး မြားလှနျး သညျ။ ဆရာဝနျကလညျး နညျးလှနျးသညျ။ ထို့ပွငျ ဆေးဝါး ပစ်စညျးကလညျး အလုံအလောကျ မရှိပေ။
ဤအခွအေနတှေငျ ဟငျနရီဒူးနနျ့သညျ အစှမျးကုနျ ဝငျရောကျကူညီလေ သညျ။ သူသညျ သူ့၌ ပါလာသော ငှအေားလုံးကို အီတလီ ရှာသားအခြို့အား ပေးလိုကျပွီး၊ အနီးရှိ မွို့သို့သှား၍ ဆေးဝါးနှငျ့ ပတျတီးမြား အမွနျဝယျယူစသေညျ။ ထို့ပွငျ အနီးအနား ရှာမြားရှိ အီတလီ အမြိုးသမီးမြားကို စညျးရုံး၍ သူနာမြားကို ဝိုငျးဝနျးပွုစုစသေညျ။ သူကိုယျတိုငျလညျး ရပေုံးကို ထမျးလကျြ အနာမြားကို လိုကျလံဆေးကွော သုတျသငျပေးသညျ။ ပတျတီးစညျးပေးသညျ။ သူ လြှောကျသှားသညျ့အခါ သူ့ခွထေောကျကို လှမျးဖကျကာ ရတေောငျးရှာသညျ့ သူနာမြားကိုလညျး ရတေိုကျပေးသညျ။ ထို့ပွငျ စဈမွပွေငျ၌ ကနျြရှိသေးသညျ့ သူနာမြားကိုလညျး သယျဆောငျ၍ နရောခထြားပေးသညျ။ သူနာမြားက သူ့အား “ဝတျစုံဖွူနှငျ့ လူ” ဟူ၍ ချေါကွသညျ။ သို့ရာတှငျ သူ့ဝတျစုံဖွူမှာ သူနာမြားကို ပွုစုရသဖွငျ့ မဖွူတော့ဘဲ ညဈထညျးနပွေီ။
တဈနသေ့၌ သူသညျ ပွငျသဈတပျသား သူနာမြား ကို ပွုစုနစေဉျ သွစထရီးယနျးတပျသားသူ နာနှဈယောကျ ရောကျရှိလာသညျ။ ပွငျသဈတပျသားမြားက “ ဟေ့ ရနျသူတပျသားတှေ ထှကျသှားကွ” ဟူ၍ အျောဟဈ နှငျထုတျ သညျ။ ထိုအခါ ဟငျနရီဒူးနနျ့သညျ ပွငျသဈတပျသားမြား၏ အပွုအမူကို တားမွဈကာ၊ ဩစထရီးယနျးတပျသား သူနာနှဈဦးကို ကောငျးစှာ လကျခံသညျ။ “သညျနရောမှာ ရနျသူဆိုတာ မရှိဘူး။ အားလုံး ညီရငျးအဈကိုတှခေညျြးဘဲ” ဟု ဟငျနရီဒူးနနျ့က ပွောဆိုသညျ။ သွစထရီးယနျး တပျသားနှဈဦးကို ကွငျနာစှာ ပွုစုစောငျ့ရှောကျသညျ။ အစက အီတလီရှာသူရှာသားမြားသညျ ပွငျသဈနှငျ့ ဆားဒီးနီးယနျးတပျသား သူနာမြားကိုသာ ပွုစုလိုကွသညျ။ သူတို့ကို ကြှနျပွုသော သွစထရီးယနျး တပျသားသူနာမြားကိုမူ မပွုစုလိုကွပေ။ သို့ရာတှငျ ဟငျနရီဒူးနနျ့၏ ကွီးမားသော ကရုဏာ စတေနာကို ခံစားသိရှိရသောအခါတှငျကား သူတို့သညျလညျး ရနျသူ၊ မိတျဆှေ မရှေး ဒုက်ခရောကျသူ သူနာတိုငျးအပျေါ ကရုဏာထားကွပသေညျ။
တဈနသေ့၌ ဘုရား ရှိခိုးကြောငျးတဈကြောငျး တှငျ သူနာ ၅၀၀ ခနျ့ကို ဟငျနရီဒူးနနျ့တို့ တှရှေိ့ကွသညျ။ ထိုသူနာမြားမှာ ငါးရကျလုံးလုံး အစာမတှေ့၊ ရေ မတှေ့၊ ဆေးမတှေ့ နှငျ့။ ဝဒေနာကို အလူးအလိမျ့ မခြိမဆံ့ ခံနကွေရရှာသညျ။ သူတို့အထဲတှငျ ပွငျသဈ၊ သွစထရီးယနျး၊ ဆလပျ၊ အာရပျ၊ ဂြာမနျ စသညျ့ဖွငျ့ လူမြိုးပေါငျးစုံပါဝငျလသေညျ။
စဈပှဲအပွီးတှငျ ရနျသူနှငျ့မိတျဆှတေို့သညျ တဈနရော တညျးတှငျ စုရုံးလကျြ ဆငျးရဲဒုက်ခ ခံနရေရှာသညျ။ ဟငျနရီဒူးနနျ့နှငျ့ အီတလီ ရှာသူရှာသားတို့သညျ ထိုသူနာတို့ကို အစှမျးကုနျ ကူညီပွုစု စောငျ့ရှောကျကွသညျ။ “ငါတို့အားလုံး ဟာ ညီအဈ ကို အရငျးအခြာတှဘေဲ” ဟူသော စကားသညျ ဤကရုဏာရှငျမြား၏ ရငျမှ ပျေါထှကျလာခဲ့ပသေညျ။
ဟငျနရီဒူးနနျ့သညျ ထိုအရပျဒသေ၌ ရကျပေါငျးမြားစှာ ကွာအောငျပငျ နထေိုငျကာ သူနာမြားကို အစှမျးကုနျ ပွုစုစောငျ့ရှောကျခဲ့သညျ။ ထိုနောကျမှ မိမိနထေိုငျရာ ဆှဈဇာလနျနိုငျငံသို့ ပွနျလာခဲ့ပသေညျ။ ယငျးသို့ ပွနျလာစဉျ သူ ၏ ရငျမှာ တငျးကပျြလကျြ ရှိသညျ။ စဈပှဲမြားကား ပျေါလာဦးမညျပငျ။ စဈပှဲမြား ပျေါလာသညျနှငျ့အမြှ သူနာမြားလညျး ပျေါလာဦးမညျပငျ။ ထိုအခါ ထိုထိုသူနာမြားကို မညျ သို့ ပွုစုစောငျ့ရှောကျရမညျနညျး။
ဟငျနရီဒူးနနျ့သညျ ထိုနေ့၊ ထိုအခြိနျမှစ၍ သူ၏ စီးပှားရေးလုပျငနျးမြား ကို စိတျမဝငျစားတော့။ ကွှယျဝခမျြးသာမှုကို ဂရုမစိုကျတော့။ ကွီးပှားတိုးတကျရေးကို အလေးမထားတော့။ သူနာမြားကို ကယျတငျစောငျ့ရှောကျရေးလုပျငနျးကိုသာ စိတျဝငျစားတော့သညျ။ သှားလညျးသညျစိတျ၊ ထိုငျလညျး သညျစိတျ၊ အိပျလညျး သညျစိတျ၊ စားလညျး သညျစိတျ။ ထို့ကွောငျ့ သူသညျ “ဆိုဖီရီနို မှတျတမျး” အမညျရှိ စာအုပျတဈအုပျကို ၁၈၆၁ ခု၌ ရေးသားသညျ။ ဆိုဖီရီနို စဈမွပွေငျ၌ သူတှမွေ့ငျခံစားခဲ့ရသညျတို့ကို နှလုံးသှေးဖွငျ့ရေးသညျ့ပမာ လှိုကျလှိုကျလှဲလှဲ ရေးသားထားခွငျးဖွဈသညျ။ ထို့နောကျ ထိုစာအုပျကို အုပျရတေဈထောငျ ပုံနှိပျပွီးလြှငျ အရေးပါသော မိတျဆှမြေားနှငျ့ ပုဂ်ဂိုလျကွီးမြားထံ ပေးပို့လသေညျ။ ထိုစာအုပျငယျသညျ ဥရောပတိုကျကွီးကို တုနျလှုပျခြောကျခြားသှားစသေညျ။
ရငျနာဖှယျ အဖွဈအပကျြမြားသညျ ကမ်ဘာတဈဝနျးလုံးသို့ တောမီးပမာ ပြံ့နှံ့သှားလေ သညျ။ ထိုစာအုပျကို အကွိမျကွိမျ ထပျမံပုံနှိပျရလသေညျ။ ထိုစာအုပျကို ဖတျရှုသူတိုငျးပငျ သူနာမြား ကယျဆယျရေးအတှကျ မညျသို့ ဆောငျရှကျရမညျ ကို စဉျးစားတှေးတောလာကွပသေညျ။
ဟငျနရီဒူးနနျ့က သူ့စာအုပျတှငျ သနားစဖှယျ သူနာမြား၏ ဘဝကို တငျပွထားသညျ။ ထို့ပွငျ သူနာမြားကို ကယျဆယျရနျ စတေနာ့ဝနျထမျး ကရုဏာရှငျမြား လိုအပျသညျ့နညျးတူ၊ ထိုကရုဏာရှငျမြားကိုလညျး သူနာပွုလုပျငနျးမြား လကေ့ငျြ့သငျကွားပေးရနျ လိုသညျ။ ဆိုဖီရီနို စဈမွပွေငျ၌ သူနာမြားကို ပွုစုရနျ ကရုဏာရှငျ စတေနာ့ဝနျထမျးမြား ပျေါထှကျလာအောငျ စညျးရုံးနိုငျခဲ့သျောလညျး၊ ထိုကရုဏာရှငျမြားမှာ သူနာပွုလုပျငနျးမြားကို မတတျကြှမျးသဖွငျ့ အခကျအခဲမြားစှာ တှရေ့သညျ ဟူ၍လညျး တငျပွထားပသေညျ။
စာအုပျ ထှကျပျေါပွီး မကွာမီပငျ ဂနြီဗာမွို့တှငျရှိသော ဟငျနရီဒူးနနျ့ ၏ မိတျဆှကွေီးလေးဦးသညျ ဟငျနရီဒူးနနျ့နှငျ့အတူ စတငျ အလုပျလုပျကွသညျ။ မိတျဆှကွေီးလေးဦးမှာ ဗိုလျခြုပျကွီးဒူဖိုး၊ ဂြီနီဗာ စတေနာ့ဝနျထမျး အသငျးကွီး၏ ဥက်ကဋ်ဌ ဂူစတမေို့နီယာ၊ ဒေါကျတာ အမ်မီယ၊ ဒေါကျတာသီအိုဒိုမောနေး တို့ ဖွဈကွသညျ။ ဟငျနရီဒူးနနျ့နှငျ့ ထိုမိတျဆှကွေီးလေးဦးတို့သညျ ငါးဦးကျောမတီတဈရပျ ဖှဲ့စညျးလိုကျသညျ။ သူနာမြားကယျဆယျပွုစုစောငျ့ရှောကျရေးအတှကျ အပွညျပွညျဆိုငျရာ ညီလာခံကွီးကို ဂြီနီဗာမွို့၌ ကငျြးပရနျ ဆျောဩဆာငျရှကျကွသညျ။
ဟငျနရီဒူးနနျ့ သညျ ထိုညီလာခံကွီး ဖွဈမွောကျရေးအတှကျ မအိပျမနေ ဆောငျရှကျသညျ။ သူ့စာအုပျကို အကွောငျးပွု၍ သူ့စတေနာကို အမြားကသိပွီး ဖွဈရာ သူသညျ နိုငျငံအမြား သို့ သှားရောကျသညျ။ ညီလာခံကွီးဖွဈမွောကျ အောငျမွငျရေးအတှကျ အရေးပါသောပုဂ်ဂိုလျကွီးမြားကို တှဆေုံ့သညျ။ အဖှဲ့အစညျးမြားကို ခညျြးကပျသညျ။ ပုဂ်ဂိုလျအသီးသီးထံသို့ စာရေးသား ပေးပို့သညျ။ သူ၏ စာအုပျမြားကို ဝငှေသညျ။ အမရေိကနျသမ်မတကွီး လငျကှနျးထံသို့ စာရေး၍ မတ်ေတာရပျခံရာ ကိုယျစားလှယျနှဈဦး စလှေတျပါမညျဟူ၍ လငျကှနျးက ကတိပေး ပွနျကွားခဲ့သညျ။
ပွငျသဈပွညျ စဈဝနျကွီးကမူ ဟငျနရီဒူးနနျ့၏ စာအုပျသညျ ပွငျသဈပွညျကို ထိပါးစသေညျဟုဆိုကာ ဟငျနရီဒူးနနျ့ကို ဆနျ့ကငျြဘကျ ပွုခဲ့သညျ။ ထိုအခါ ဟငျနရီဒူးနနျ့သညျ နပိုလီယံ ထံမှောကျသို့ ဝငျရောကျပွီး ရှငျးလငျးတငျပွခဲ့ သညျ။ မတ်ေတာရပျခံခဲ့သညျ။ ထိုအခါ နပိုလီယံက ဟငျနရီဒူးနနျ့၏ လုပျငနျးကို စိတျဝငျစားကွောငျး အားတကျဖှယျရာ ပွနျကွားပွောဆို လိုကျသညျ။
သို့ဖွငျ့ ၁၈၆၃ ခု အောကျတိုဘာလ တှငျ ပထမဦးဆုံး ညီလာခံကို ဂြီနီဗာမွို့၌ ကငျြးပခဲ့သညျ။ နိုငျငံပေါငျး ၁၅ နိုငျငံမှ အရေးပါအရာရောကျသော ကိုယျစားလှယျကွီးမြား တကျရောကျကွသညျ။ မိုနီယာက ဥက်ကဋ်ဌ၊ ဟငျနရီဒူးနနျ့က အတှငျးရေးမှူးအဖွဈ ဆောငျရှကျသညျ။ ထိုညီလာခံမှာပငျ ဟငျနရီဒူးနနျ့ တောငျ့တသော ကွကျခွနေီအသငျးကွီး သန်ဓတေညျခဲ့သော ၁၈၆၄ ခု နှဈမှစ၍ အကောငျအထညျပျေါခဲ့သညျ။ ကမ်ဘာအနှံ ပြံ့နှံ့သှားခဲ့သညျ။ နောကျဆုံး ကွကျခွနေီလုပျငနျးသညျ တဈစတဈစ တိုးတကျလာစဉျ ဟငျနရီဒူးနနျ့၏ စီးပှားရေးလုပျငနျးမြားမှာမူ တဈစတဈစ ဆုတျယုတျကဆြငျးလာသညျ။ သူသညျ စီးပှားရေးလုပျငနျးမြားကို ဂရုမပွုဘဲ ကွကျခွနေီလုပျငနျးမြားကိုသာ ဂရုပွု ဆောငျရှကျနသေောကွောငျ့ ဖွဈသညျ။ နောကျဆုံး ၁၈၆၇ခု နှဈတှငျ သူ၏ စီးပှားရေးလုပျငနျးအားလုံး ဖရိုဖရဲ ပွိုကှဲပကျြစီးသှားလသေညျ။ ထိုအခါ သူ၏ စီးပှားရေးလုပျငနျးတှငျ အစုရှယျယာ ထညျ့သှငျးပါဝငျသူမြားက သူ့ကို အပွဈဆိုကွသညျ။ သူ့အကွောငျး မကောငျးပွောကွသညျ။
ဤတှငျ ဟငျနရီဒူးနနျ့သညျ သူခဈြမွတျနိုးလှသညျ့ ကွကျခွနေီအသငျးကွီးမှ ခကျြခငျြး နုတျထှကျလိုကျလသေညျ။ စီးပှားရေးနှငျ့ပတျသကျ၍ သူသညျ နာမညျပကျြတဈယောကျ ဖွဈသှားရာ၊ သူ့ကွောငျ့ မှနျမွတျလှသော ကွကျခွနေီအသငျးကွီးနှငျ့ ကွကျခွနေီလုပျငနျးမြားကို မထိခိုကျစလေိုသဖွငျ့ သူ့ခမြာ အသငျးမှ နုတျထှကျခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ ဟငျနရီဒူးနနျ့သညျ အသငျးမှ နုတျထှကျလိုကျသောအခါ လုံးဝ ဩဇာအာဏာ မရှိတော့ပေ။ သူက မညျမြှ စတေနာထား၍ မညျသို့ အကွံကောငျး၊ ဉာဏျကောငျးမြား ပေးစကောမူ လကျမခံကွတော့ပေ။ သူ့ကို လုံးဝ ဂရုမပွုကွတော့ပေ။ ဥပက်ေခာ ပွုထားလိုကျကွလသေညျ။
ထိုအခြိနျတှငျ သူ့၌ ငှကွေေးလညျး မရှိတော့ပေ။ အပေါငျးအသငျးလညျး မရှိတော့။ သူသညျ အထီးကနျြ ဖွဈနပေပွေီ။ နှဈအနညျးငယျအတှငျးမှာပငျ ဟငျနရီဒူးနနျ့၏ အမညျသညျ ကွကျခွနေီလောကမှ ပြောကျကှယျသှားလသေညျ။ သူ့အမညျနှငျ့အတူ ဟငျနရီဒူးနနျ့သညျလညျး ဂြီနီဗာမွို့မှ ပြောကျကှယျသှားလသေညျ။
ထိုသို့ ပြောကျကှယျသှားရာမှ နှဈပေါငျး ၃၀ အကွာတှငျ သတငျးစာဆရာတဈဦးသညျ ဟိုကျဒငျအမညျရှိ ဆှဈတောငျပျေါ ရှာကလေးတဈရှာသို့ ဖွတျသနျးသှားလာစဉျ၊ ထိုရှာ၌ ထူးခွားသော အသှငျရှိသညျ့ အဘိုးအိုတဈဦးကို တှေ့ ရသညျ။ ထိုအဘိုးအိုမှာ ဆံမုတျဆိတျမြား ဖှေးဖှေးဖွူလကျြ၊ အိမျကလေး တဈလုံးတှငျ မထငျမရှား ဆငျးဆငျးရဲရဲ နထေိုငျလကျြရှိသညျ။ သတငျးစာဆရာသညျ ကွငျနာသော အမူအရာရှိသညျ့ အဘိုးအိုနှငျ့ စကားစမွညျ ပွောရာမှ ထိုအဘိုးအိုမှာ အခွားသူမဟုတျ။ ကွကျခွနေီ ဖခငျကွီး ဟနျနရီဒူးနနျ့ ဖွဈကွောငျး သိရှိသှားသညျ။
သတငျးစာဆရာသညျ အံ့အားသငျ့ မဆုံးပွီ။ သူသညျ ကွကျခွနေီ ဖခငျကွီး ဟငျနရီဒူးနနျ့ တဈယောကျကှယျလှနျပွီဟု ထငျမှတျခဲ့သညျ။ သူ့နညျးတူ အမြားကလညျး ထငျမှတျခဲ့သညျ။ ယခုကား ကွကျခွနေီဖခငျကွီးမှာ အသကျထငျရှား ရှိနတေုနျးပငျ။ သတငျးစာဆရာသညျ ဟငျနရီဒူးနနျ့ကို မမြှျောလငျ့ဘဲ ဟိုကျဒငျရှာကလေး၌ တှရှေိ့ပုံ အကွောငျးအစုံကို သတငျးစာမြားသို့ သတငျးရေးသား ပေးပို့လိုကျသညျ။ ထိုအခါ လူအမြားသညျ လှုပျလှုပျရှရှ ဖွဈသှားကွသညျ။
အခြို့က ဟငျနရီဒူးနနျ့ထံ စာမြားရေးကွသညျ။ အခြို့က ငှကွေေး လကျဆောငျမြား ပေးပို့ကွသညျ။ အခြို့က လူကိုယျတိုငျ လာရောကျတှဆေုံ့ကွသညျ။ ထို့နောကျ တညျထောငျခါစဖွဈသော နိုဗယျ(လျ)ဆု ခြီးမွှငျ့ရေးအဖှဲ့ကွီးက ၁၉၀၁ ခုနှဈတှငျ ပထမဆုံးသော ငွိမျးခမျြးရေးဆိုငျရာ နိုဗယျ(လျ)ဆုကွီးကို ဟငျနရီဒူးနနျ့နှငျ့ ပါစီတို့အား ပူးတှဲပေးလိုကျလသေညျ။ ပါစီမှာ ငွိမျးခမျြးရေး အသငျးကွီးကို တညျထောငျသူ ပွငျသဈလူမြိုး ဖရကျဒရဈပါစီပငျ ဖွဈပသေညျ။
ဟငျနရီဒူးနနျ့သညျ ငွိမျးခမျြးရေး နိုဗယျ(လျ) ဆုကို ရရှိပွီး ၉ နှဈအကွာ၊ ၁၉၁၀ ပွညျ့နှဈ အသကျ (၈၂) နှဈအရှယျတှငျ ဟိုကျဒငျရှာ ဆေးရုံကလေးမှာပငျ ကှယျလှနျသှားရှာပသေညျ။ ၁၉ ရာစုနှဈတှငျ လူသားတို့အကြိုးကို အဆောငျရှကျဆုံး ပုဂ်ဂိုလျကို ညှနျပွပါဆိုလြှငျ အမြားကပငျ ဟငျနရီဒူးနနျ့ကို ညှနျပွကွပမေညျ ဖွဈပသေညျ။ ဟငျနရီဒူးနနျ့ကို ဂုဏျပွုတဲ့အနနေဲ့ သူ့ရဲ မှေးနမေ့လေ (၈) ရကျနကေို့ နိုငျငံတကာကွကျခွနေီနအေ့ဖွဈ သတျမှတျထားသညျ။
” ဖာခေါင်းများသို့ ပေးစာ…. ” ယခုခေတ် လူငယ် ကျား / မ မရွေး ပြီးဆုံးအောင် ဖတ်ပေးကြ​စေလို ပါတယ်​​နော်​.
သင်ကြိုက်တဲ့ အပင်မျိုးစုံ ကို ဘွန်စိုင်း အပင်ငယ်လေးတွေဖြစ်အောင် စိုက်ပျိုးနည်း
ကမ္ဘာကြီး ပေါ် မှာ ( ၁၂ )ကြိမ် တိုင်တိုင် ကျရောက် ခဲ့ဖူးသော ကပ်ေ ရာဂါ ဆိုးကြီး များ
ခုခေတ်မှာ သိဖို့ခက်ခဲလာတဲ့ နေအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မစိုက်အပ်သော အပင်များ ၊ အိမ်ဆောက်ရက် ရွေးနည်း ၊ မသုံးအပ်သော သစ် (၈) မျိုးအကြောင်း စုံစုံလင်လင်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်